ပင်မ - အကောင်းဆုံး အခမဲ့ PC ဂိမ်းများ
အကောင်းဆုံး အခမဲ့ PC ဂိမ်းများ
အခမဲ့ Robux စစ်ဆေးမှုမရှိသော မီးစက် 2022 - Roblox
garena မှ Free Fire စိန်မီးစက် 2022
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ထားသည်Twitter စာမျက်နှာကို ၀ င်းဒိုးအသစ်ဖြင့်ဖွင့်သည်
မီးစက် ဧပြီလ 8, 2022
ဤပို့စ်တွင် အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ အခမဲ့ robux ကို မည်သို့ရယူရမည်ကို ရှင်းပြရန် ကြိုးစားပါမည်။ အဲလိုပဲ…
Resident Evil3Nemesis- ဂိမ်းကို3ခုနှစ် ဧပြီလ 2020 ရက်နေ့တွင် ထွက်ရှိပါမည်။
PC ဂိမ်းများ ဧပြီလ 1, 2022
Resident Evil 3: Nemesis ထွက်ရှိမှုကို ဧပြီလ 2020 အတွက်သာ စီစဉ်ထားသော်လည်း PC configurations များသည်...
Blood Rage - ဒစ်ဂျစ်တယ် ထုတ်ဝေမှု အကောင်းဆုံး အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ် - ဗားရှင်း အပြည့်အစုံ
Blood Rage: Digital Edition သည် အခြား Viking မျိုးနွယ်စုများနှင့် တိုက်ခိုက်ရန်၊ ရှင်သန်ရန်၊
လူသားအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပါ။ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
လူသားအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပါ။ - ဒါက အတိတ်က အကျော်ကြားဆုံး ဂိမ်းတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂန္တဝင်...
Call of Duty: Modern Warfare2ကင်ပိန်း remastered
PC ဂိမ်းများ မတ်လ 18, 2022
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော Call of Duty- Modern Warfare2ကမ်ပိန်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသွင်အပြင်များ၊ ကာတွန်းများ၊ ရူပဗေဒ...
ပီစီနှင့် Mac တွင် အခမဲ့ကစားနိုင်သော အကောင်းဆုံးဂိမ်း 12 ခု
PC ဂိမ်းများ, reviews, ထိပ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲ မတ်လ 17, 2022
အွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုးတွင် ပုံမှန် ပရိုမိုးရှင်းများရှိနေသော်လည်း PC တွင် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည် စျေးကြီးသည်။ ငါတို့မှာ ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုရှိတယ်…
YouTube ဗီဒီယိုများကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်း
Movierulz Raya နှင့် နောက်ဆုံးနဂါး (2021)
Apex Legends ဂိမ်းသည် Battle Royale ဂိမ်း 2020 ကိုကစားပါ- Apex Legends တွင် ပေါ်လာနိုင်သည့် အင်္ဂါရပ်အသစ်များ
Garena Free Fire – Diamonds Generator Tool နှင့် အခြားနည်းလမ်း7ခု…
မီးစက်By Margaret Caffrey ဧပြီလ 8, 2022 မှတ်ချက် Leave
ဤပို့စ်တွင် အတည်ပြုခြင်းမရှိဘဲ အခမဲ့ robux ကို မည်သို့ရယူရမည်ကို ကျွန်ုပ်ရှင်းပြပါမည်။ Minecraft ကဲ့သို့ပင်၊ Roblox သည် ကလေးများနှင့် လူငယ်များအတွက် ထူးခြားသော အတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်သည့် အခြေခံ ကစားသမားပေါင်းများစွာ ဂိမ်းတစ်ခုအဖြစ် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါက ရိုးရိုးဂိမ်းတစ်ခုမဟုတ်ပေမယ့် အပျော်တမ်း developer တွေအတွက်လည်း ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်...
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဧပြီလ 1, 2022 မှတ်ချက် Leave
Resident Evil 3: Nemesis ၏ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်းကို ဧပြီလ 2020 အတွက်သာ စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သော်လည်း PC configurations များကို ရရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သတင်းကောင်းကတော့ သင် RE2 ကို run နိုင်ရင်၊ သင်လည်း အဲဒါကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိနိုင်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် မထုတ်ဝေရသေးသော ရုပ်ပုံများကို ထုတ်ဝေပြီးနောက် ကြေငြာချက်သည် အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မှာ အမြဲတမ်း...
Blood Rage- Digital Edition သည် အခြား Viking မျိုးနွယ်စုများနှင့် တိုက်ခိုက်ရန်၊ ရှင်သန်ရန်၊ နတ်ဘုရားများပင် မမြင်ဖူးသော ဘုန်းအသရေကို ရယူကာ Ragnarok မဖြစ်ပွားမီ Valhalla သို့ ရောက်ရန် ကြိုးစားရမည့် ထူးခြားသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Blood Rage ဒေါင်းလုဒ် ဖြန့်ချိမှု ရက်စွဲ- မေလ 27 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- မဟာဗျူဟာ ဖန်တီးသူ- Exozet ပလပ်ဖောင်း- PC Interface ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi5...
လူသားအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပါ။ - ဤသည်မှာ အတိတ်က အကျော်ကြားဆုံးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ကားဖြစ်ပြီး၊ သင်သည် မကောင်းဆိုးဝါး ဂြိုလ်သားများဘက်မှ ရပ်တည်ကာ လူများနှင့် ၎င်းတို့၏ ပျက်စီးလွယ်သော လူ့ယဉ်ကျေးမှုအားလုံးကို စတင်ဖျက်ဆီးသည့် ဂန္တဝင် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည်။ စွန့်စားခန်း၊ Open World၊ 28rd Person Developer- Black Forest ဂိမ်းများ၊...
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey မတ်လ 18, 2022 မှတ်ချက် Leave
အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော Call of Duty- Modern Warfare2ကမ်ပိန်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသွင်အပြင်များ၊ ကာတွန်းရုပ်ပုံများ၊ ရူပဗေဒလုပ်ဆောင်မှု၊ HDR အလင်းရောင်နှင့် အခြားအရာများစွာဖြင့် အလုံးစုံပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော ဂရပ်ဖစ်များကို ပေးဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ Call of Duty: Modern Warfare2Campaign Remastered သည် ယူရို ၂၄.၉၉ ကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ Call of Duty: Modern Warfare နှင့် Call of Call of Duty အတွက် Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle ပါ၀င်သည် ။
PC ဂိမ်းများ, reviews, ထိပ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲBy Margaret Caffrey မတ်လ 17, 2022 မှတ်ချက် Leave
အွန်လိုင်းစတိုးအမျိုးမျိုးတွင် ပုံမှန် ပရိုမိုးရှင်းများရှိနေသော်လည်း PC တွင် ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းသည် စျေးကြီးသည်။ သင့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အဖြေတစ်ခုရှိသည်- အလွန်ကောင်းမွန်သော အခမဲ့ကစားနိုင်သောဂိမ်းများကို အခမဲ့ကစားပါ။ မထိတ်လန့်ကြနှင့်၊ ဤတောအုပ်၌ ငါတို့သည် ဂျုံစပါးကို အဖျင်းနှင့် ခွဲထားပြီ။ နွေရာသီသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တံခါးကို လာခေါက်နေသည် ၊ လက်ပ်တော့ တစ်လုံး နဲ့ ဖြစ်ဖြစ်...
PS4 တွင် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး Death Stranding ဂိမ်း
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey မတ်လ 17, 2022 မှတ်ချက် Leave
Hideo Kojima နဲ့ သူ့အဖွဲ့တွေရဲ့ နောက်ဆုံးဖန်တီးမှုဟာ အကျဉ်းချုပ်ရခက်တဲ့ အယူအဆတစ်ခုပါ။ Death stranding game သည် မကြာခဏဆိုသလို အပြုသဘောဆောင်သောနည်းလမ်းဖြင့် အံ့အားသင့်ဖွယ်လည်း အန္တရာယ်များသည်။ အပျော်တမ်းအရာဝတ္ထုတစ်ခု ကျန်နေချိန်တွင်၊ ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်ရန် နှင့် အထီးကျန်မှုကို အောင်နိုင်စေမည့် ဇာတ်လမ်းအားလုံး၏အထက်တွင်ရှိသည်။ ဤနေရာတွင် ဘက်လိုက်မှုမှာ ရှင်းနေသည်- ကစားသမားကို ဖယ်ရှားပါ...
မီးစက်By Margaret Caffrey မတ်လ 12, 2022 မှတ်ချက် Leave
Garena Free Fire – Diamonds Generator Tool နှင့် စိန်များရရှိရန် အခြားနည်းလမ်း7ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယမရှိပါ – Garena သည် ထိုနေရာတွင် စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး မိုဘိုင်းဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ iOS နှင့် Android စနစ်နှစ်မျိုးလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်၊ Free Fire ပလပ်ဖောင်းတွင် ထူးခြားသောဂိမ်းကစားခြင်းနှင့် ထူးခြားထင်ရှားသည့်ဇာတ်ကောင်များပါရှိသည်။…
Danger Scavenger အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey မတ်လ 8, 2022 မှတ်ချက် Leave
ဆိုက်ဘာပန့်ခ်ပုံစံရှိ Danger Scavenger သည် ၎င်း၏ဇာတ်လမ်းကို ပြောပြမည်ဖြစ်သည်။ စာရေးဆရာများက ကုသပြီး Scavengers ဟု အမည်ပြောင်ပေးထားသော အဖွဲ့တွင် ပါဝင်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ခိုင်ခံ့ပြီး စိုးလ်မရှိသော ဉာဏ်ရည်တုနှင့် ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ တိုက်ပွဲများသည် ကြီးကျယ်ခမ်းနားပြီး အမျိုးမျိုးသော စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့် ပြည့်နေမည်ဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သာမက သူငယ်ချင်းတစ်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့်လည်း ကစားနိုင်ပါတယ်...
Beyond: Two Souls အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Beyond: Two Souls သည် ရှားပါးဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခု၏ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဂိမ်းတစ်ခုမျှသာမက၊ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ ဇာတ်ကွက်နှင့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့် ဇာတ်ကောင်များပါရှိသော အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်နိုင်သော သိပ္ပံ-Fi သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- ဇူလိုင်လ 22 ရက်၊ 2019 ခုနှစ် အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ စွန့်စားခန်း၊ 3rd Person Platform- PC Interface ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi23 ဇာတ်လမ်းသည် Jody Holmes ကောင်မလေးအကြောင်း ပြောပြသည်...
Centralia- Homecoming Full Version
Centralia- Homecoming သည် အဆိုးဆုံးအခြေအနေများ၊ ဘီလူးများ၊ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများနှင့် ဆန်းကြယ်မှုများနှင့် အလွန်ကြွယ်ဝသော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များတွင် သင်ရှင်သန်ရမည့် ပထမဆုံးလူထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မကောင်းဆိုးဝါးသည် မရဏကမ္ဘာမှ စိမ့်ဝင်သွားပြီး ၎င်း၏လမ်းကြောင်းရှိ အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပစ်တော့သည်။ တော်တော်များများက...
Steel Division2အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Steel Division2သည် အရှေ့ခြမ်းတွင် ပြုလုပ်နေသည့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ဗျူဟာဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် 1:1 စကေးဖြင့် စစ်တပ်၏ အလှည့်ကျ ကွပ်ကဲမှု နှင့် စစ်သည် ထောင်ပေါင်းများစွာ သင့်ကွပ်ကဲမှုအောက်တွင် ရှိနေမည့် အချိန်နှင့်တပြေးညီ နည်းဗျူဟာဆိုင်ရာ တိုက်ပွဲများ ပါဝင်သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့် 1:1 စကေး၏ တက်ကြွသော ဗျူဟာမြောက် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ယေဘူယျအဖြစ် ကစားပါ...
Monster Truck Games အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း- ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဖေဖေါ်ဝါရီလ 17, 2022 မှတ်ချက် Leave
ကြီးမားသောဘီးများဖြင့် သင်၏ အားကောင်းမောင်းသန် ထရပ်ကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ မောင်းနှင်ပါ။ အမျိုးအစားများ- အလွန်အမင်း ဖိုင်အရွယ်အစား- 105.5 Mb ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း ဂိမ်းဖော်ပြချက် ဘီလူးထရပ်ကားများအကြောင်း ပြိုင်ကားဂိမ်း3ခု - Insane Monster Truck Racing၊ Monster Truck Safari နှင့် Ultra Monster Truck Games အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း- ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ။ သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ခက်ခဲသောအတားအဆီးလမ်းကြောင်းများတစ်လျှောက်ပြိုင်ပါ။ ပြိုင်ကွင်းများ၊ ဆာဗားနား၊...
Grand Theft Auto2အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်အပြည့်အစုံ - ဗားရှင်း
Grand Theft Auto2သည် အပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြင့် စီးရီး၏ အဆက်ဖြစ်သည်။ ဂရပ်ဖစ်နဲ့ အင်ဂျင်ကို မြှင့်တင်ထားပါတယ်။ GTA II၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် များပြားလှသော တရားမဲ့မှုတွင် လိုက်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စာရေးဆရာများသည် ဂိမ်းကစားသူများ လိုအပ်သည်များကို ကောင်းစွာသိကြပြီး၊ ၎င်းတို့သည် အချိန်၏လိုအပ်ချက်များနှင့် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တွေ့ရှိချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရှိသည်…
HyperParasite အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
HyperParasite သည် twin-stick shooter နှင့် roquelike အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အပိုင်းတစ်ခုစီသည် ထူးခြားသည့်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရန်လိုသောဂြိုလ်ကပ်ပါး၏အခန်းကဏ္ဍတွင်ဇာတ်ကောင် 60 ကိုထိန်းချုပ်ပါ။ စားနပ်ရိက္ခာကွင်းဆက်၏ထိပ်သို့သွားပါ- သမ္မတကိုဖမ်းပါ၊ အနီရောင်ခလုတ်ကြီးကိုနှိပ်ပါ၊ ရန်သူများကိုအနိုင်ယူပါ။ HyperParasite ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ထုတ်ဝေသည့်နေ့- ဧပြီလ3ရက်၊ 2020...
Ary and the Secret of Seasons အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
3D ပလပ်ဖောင်းဖန်တီးသူ Ary and the Secret of Seasons သည် ရာသီများအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ပေးစွမ်းသော်လည်း ၎င်းထက်ကျော်လွန်၍ ကမ်းလှမ်းစရာများစွာရှိပုံမပေါ်ပါ။ သုံးသပ်ချက်တွင် ပိုမိုဖတ်ရှုပါ။ ထုတ်လုပ်သူ- eXiin၊ ငါးမျှားလေးရဲ့ ထုတ်ဝေသူ- Modus ဂိမ်းများ ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- စက်တင်ဘာ 1၊ 2020 Ariel အမည်ရှိ မိန်းကလေးသည် အုပ်ထိန်းသူ၏သမီးဖြစ်သည်...
မီးခိုးရောင်ဇုန် [v 1.0 အစောပိုင်းဝင်ရောက်မှု] (2020) PC
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2022 မှတ်ချက် Leave
Gray Zone အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း ဗားရှင်း- RTS သေနတ်သမား RPG အစိတ်အပိုင်းများ။ ဤအရာသည် ဝေးကွာသော အနာဂတ်တွင် သူ၏သခင်များကို ပုန်ကန်သော ကျွန်တစ်ဦး၏ ဗေဒင်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ သင်သည် အမှတ်ရဖွယ်ဇာတ်ကောင်များ၊ ရယ်စရာ ဒိုင်ယာလော့ခ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။ အမျိုးအစား- Strategy (RTS), RPG ထုတ်လုပ်သူ- Eastworks ထုတ်ဝေသူ- Eastworks ပလပ်ဖောင်း- PC ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- လိုင်စင်ဗားရှင်း- v...
Elvenar - အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့် အလှည့်ကျဗျူဟာ
ဗျူဟာဂိမ်းများကို ပျော်ရွှင်စွာကစားလိုပါက Elvenar ဂိမ်းသည် သင့်အတွက်နေရာဖြစ်သည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ဤအွန်လိုင်းဂိမ်းကိုမည်သည့်ဘရောက်ဇာတွင်မဆိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းတွင် သင်သည် မြို့တည်ဆောက်မှုနှင့် HOMM မုဒ်တွင် ရန်သူများကို တိုက်ခိုက်ရန် တဖြည်းဖြည်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး…
ပုဂံအွန်လိုင်းဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Pagan Online သည် Wargaming (World of Tanks မှလူသိများသည်) ထုတ်ဝေသည့် ခရစ်ယာန်မတိုင်မီက ဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များဖြင့် စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတွင် စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာတစ်ခု၌ ဖြစ်ပွားသည့် isometric RPG ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Pagan Online ကို တစ်ဦးတည်းနှင့် ကွန်ရက်ပေါ်တွင် နှစ်မျိုးလုံး ကစားနိုင်သော်လည်း ဦးစွာ Pagan Online torrent ကို သင့်ကွန်ပြူတာတွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- 2019 နှစ် အမျိုးအစား-…
Goosebumps Dead of Night အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ကြောက်စရာကောင်းသော ဇာတ်လမ်းတိုများအတွက် Goosebumps Dead of Night။ ဂိမ်းသည် "Horror" ဇာတ်လမ်းများကို အခြေခံထားသည်။ ဖြစ်ရပ်များနှင့် ရောင်စုံဇာတ်ကောင်များ ပြည့်နှက်နေသော အခန်းများအားလုံးကို ဖြတ်သန်းပါ။ ရင်ဆိုင်ရမည့် ဘီလူးများနှင့် ပြိုင်ဘက်အားလုံးကို ဉာဏ်ရည်တုဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဒါပေမယ့် သူက မင်းကို အရှုံးမပေးဘူး၊ ရဲရင့်တယ်။ ထူးထူးခြားခြားစတိုင်လ်ဆိုတာ မှတ်သားစရာပါပဲ...
New York တွင်လူသတ်မှု PC ဂိမ်းကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
မှုခင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး လျှို့ဝှက်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပါ။ နယူးယောက်တွင်လူသတ်မှုကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ PC Game အခမဲ့ New York တွင်လူသတ်မှု အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် - PC Games ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို အပြီးသတ်ပါ။ ဤပျော်စရာကောင်းပြီး စွဲလမ်းစေသော လျှို့ဝှက်အရာဝတ္ထုဂိမ်းတွင် ရာဇဝတ်သားကို ဖမ်းပါ။ အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနသို့ ပြောင်းရွှေ့ခံထားရသော Turino နှင့် Lamont ၏ စုံထောက်များနှင့် ပူးပေါင်းပါ။…
ဖှယျ Soul: အမှောင် Fantasy ရှင်သန်မှု
Grim Soul: Dark Fantasy Survival သည် သင့်ဇာတ်ကောင်ကို စုပ်ယူပြီး ဘီလူးများ၊ သူဌေးများနှင့် ရန်လိုသောဂိမ်းကစားသူများနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ပွင့်လင်းကမ္ဘာကို စူးစမ်းလေ့လာရန် လိုအပ်သည့် ဂိမ်းအများအပြားဖြစ်သည်။ နေရာများ၊ အရာဝတ္ထုများနှင့် သတ္တဝါများကို အမိုက်စား စိတ်ကူးယဉ်ပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Grim Soul- Android အတွက် Dark Fantasy Survival သည် သင့်အား အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာရပ်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပြီး သင့်ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်နိုင်သည်...
Little Reaper (2020) PC အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ဤရောင်စုံစွန့်စားခန်းပလပ်ဖောင်း Little Reaper တွင် Grim Reaper ၏သေးငယ်သောလက်ထောက် Ollie အဖြစ် Little Reaper ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောနယ်ပယ်ကိုဖြတ်၍ တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ပြီး ရိတ်သိမ်းလိုက်ပါ။ Grim သည် ထိုက်တန်သော အားလပ်ရက်ကို ယူစဉ်တွင် Ollie သည် Death's Mansion ကို ဆက်လက် တာဝန်ယူခဲ့သည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- ဇူလိုင်လ 20 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- Arcade၊ ပလပ်ဖောင်း၊ စွန့်စားခန်း၊ အင်ဒီ ထုတ်လုပ်သူ- Little Reaper Games ထုတ်ဝေသူ-...
Succubus: ဂိမ်းကို နောက်ဆုံးမှာ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ 2021/2022 ကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
နယူးအားကစားပြိုင်ပွဲBy Margaret Caffrey ဖေဖေါ်ဝါရီလ 9, 2022 မှတ်ချက် Leave
Succubus သည် တကယ့် survival simulator တစ်ခုဖြစ်သော ထိတ်လန့်စရာဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ succubus အဖြစ် ရိုးရာပုံပြင်များတွင် လူသိများသော လှပသော နတ်ဆိုးသူရဲကောင်းတစ်ဦးအဖြစ် သင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။ ငရဲရဲ့ တကယ့် စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကြီးထဲကို ရောက်သွားလိမ့်မယ်၊ ထူးဆန်းသလို ဖြစ်နေတာကို မကျေနပ်တဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ်။ ဖြန့်ချိသည့်ရက်:…
Deck of Ashes (2020) PC အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2022 မှတ်ချက် Leave
Deck of Ashes သည် နည်းဗျူဟာကတ်တိုက်ပွဲများပါရှိသော စွန့်စားခန်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တယောက်ပြီးတယောက်၊ ရွေးနှုတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းတလျှောက် ဆန့်ကျင်ရေးသူရဲကောင်းဂိုဏ်းကို ဦးဆောင်ပါ။ အုံ့မှိုင်းသော စိတ်ကူးယဉ်ကမ္ဘာကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး ထူးခြားသော တိုက်ပွဲကုန်းပတ်တွင် ကတ်များကို စုဆောင်းပါ။ မဟာမိတ်စခန်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစဉ်တွင် သင်၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။ Deck Ashes ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- ဇွန်လ 9၊…
Electro Ride- နီယွန်ပြိုင်ကား အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း – ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Electro Ride- The Neon Racing – ယခင် East Bloc မှ နီယွန်ကားများကို ပြိုင်ကားများ။ အရှေ့အုပ်စု မပြိုလဲသော်လည်း ထာဝရကြွယ်ဝမှုနှင့် တိုးတက်မှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်လာသည့် အခြားဥရောပတွင်၊ ဤသည်မှာ သင့်အား ကျော်ကြားမှု စောင့်ကြိုနေပါသည်။ Electro Ride ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- ဇူလိုင် 10၊ 2020 အမျိုးအစား- Racing Platform- PC Interface ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi8 ဖော်ပြချက်-...
တစ်ချပ်- ပင်လယ်ဓားပြ စစ်သည်များ ၄
One Piece Pirate Warriors4သည် Luffy နှင့် ၎င်း၏ ပင်လယ်ဓားပြအဖွဲ့၏ စွန့်စားခန်းအသစ်တွင် သင်ကိုယ်ကို နှစ်မြှုပ်နိုင်သည့် တတိယလူ ဓားခုတ်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။... ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- မတ်လ 27 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ အန်နီမီ ထုတ်လုပ်သူ- Koei Tecmo ထုတ်ဝေသူ- BANDAI NAMCO ဖျော်ဖြေရေး ပလပ်ဖောင်း- PC Interface ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi13 အသံဘာသာစကား- ဂျပန် ဖော်ပြချက်- အဆိုပါ...
Sims4ဒစ်ဂျစ်တယ်အဆင့်မြင့်ဗားရှင်း အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ဒီဂိမ်းအကြောင်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသည် ဒဏ္ဍာရီလာ simulator ၏မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းထွက်ရှိရန် စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ယခုလည်း နေ့ရက်ရောက်လာပြီ။ Sims4digital deluxe edition ကို virtual reality တွင် ၎င်းတို့၏ စံပြဘဝကို တည်ဆောက်လိုသော ကစားသမားတိုင်းအတွက် ယခုရရှိနိုင်ပါပြီ။ developer များက ၎င်းကို ဖန်တီးနိုင်သည်...
မသေနိုင်သောအမွေအနှစ်- Jade Cipher
Immortal Legacy- The Jade Cipher သည် ထိတ်လန့်မှုနှင့် ရှင်သန်မှုတို့ ရောနှောထားသော စွန့်စားခန်းအက်ရှင်ဂိမ်းဖြစ်ပြီး ပထမလူမြင်ကွင်းနှင့် အက်ရှင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် တရုတ်ဒဏ္ဍာရီများနှင့် ဒဏ္ဍာရီများ၊ စွန့်စားမှုနှင့် အခြားများစွာသော ကမ္ဘာတွင် နှစ်မြှုပ်ခြင်းကို သင်တွေ့လိမ့်မည်... Immortal Legacy ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- မေလ 21 ရက်၊ 2020 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ 1st Person ထုတ်ဝေသူ- Viva Games ပလပ်ဖောင်း-...
Jewel Match Solitaire 2. စုဆောင်းသူ၏ထုတ်ဝေမှု
Jewel Match Solitaire2- အလိမ်ခံကတ်ဂိမ်း၏ ဒုတိယအပိုင်းသည် ၎င်း၏ခမ်းနားသော ရဲတိုက်များနှင့်အတူ အလယ်ခေတ်၏နိုင်ငံတော်တစ်လျှောက် အံ့ဖွယ်ခရီးတစ်ခုဆီသို့ တစ်ဖန်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဂန္တဝင် solitaire အမျိုးအစားများစွာကို စူးစမ်းလေ့လာပါ၊ အေးခဲထားသော၊ ပိတ်ဆို့ထားသောကတ်များဖြင့် ခက်ခဲသောအတားအဆီးများကို ကျော်လွှားကာ အဆင့်သုံးရာကျော်တွင် အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဆုကြေးငွေများကို အသုံးပြုပါ...
ATOM RPG Trudograd အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ATOM RPG Trudograd (ATOM RPG Trudograd) သည် နျူကလီးယား ဓာတ်မတည့်မှု ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော ကမ္ဘာသို့ သွားရမည့် အလှည့်ကျ အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပျက်ကွက်မှုအသစ်တစ်ခု၏ အကြိုတွင် ၎င်းကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးစားပါ... ထုတ်ဝေမည့်ရက်စွဲ- အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့် မေလ 11၊ 2020 အမျိုးအစား- RPG၊ Survival ထုတ်လုပ်သူ- AtomTeam ထုတ်ဝေသူ- AtomTeam ပလပ်ဖောင်း- PC ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- လိုင်စင်ဗားရှင်း-...
Deep Rock Galactic - အေးမြသော space gnomes၊ လုံးဝပျက်စီးနိုင်သောပတ်ဝန်းကျင်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသော ဂူစနစ်များနှင့် ဂြိုလ်သားဘီလူးများ၏ အဆုံးမရှိသောလှိုင်းလုံးများကို သင်တွေ့နိုင်မည့် ပူးတွဲဂိမ်းအတွက် ပထမဆုံးလူအမြင်ဖြင့် ပထမဆုံးသော sci-fi သေနတ်သမားဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားများ- 2020 ဂိမ်းများ / Shooters / Action / First-Person / Open World / Survival Release Release date- May 13, 2020…
BULLETSTORM အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 31, 2022 မှတ်ချက် Leave
စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် အက်ရှင်တွေနဲ့ ရက်စက်တဲ့ သေနတ်သမားကို ကစားချင်ပါသလား။ ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်တွင် Bulletstorm အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ကို လိုအပ်ပါသည်။ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်- 2017 အမျိုးအစား- 3D / 2017 / 1st Person / Shooter / Action Developer: People Can Fly Language: ENG Voice Language: ENG Tablet: PLAZA SYSTEM လိုအပ်ချက်များ Operating System: Windows 7/8 /…
တစ်နေ့နေ့ မင်း (2020) PC ပြန်လာလိမ့်မယ်။
တစ်နေ့နေ့တွင် You'll Return သည် အခန်းကဏ္ဍ-ကစားနည်းဂိမ်း၊ ရှင်သန်မှုနှင့် ထိတ်လန့်မှုတို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် အလွန်ခက်ခဲသော ပဟေဋ္ဌိတစ်ခုဖြစ်ပြီး ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ သမီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသော ဖခင် ဒန်နီယယ်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားသည့် ချက်သမ္မတနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရမည်ဖြစ်သည်... ထုတ်ဝေမည့်ရက်စွဲ : မေလ5ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- စွန့်စားမှု၊ ထိတ်လန့်မှု၊ 1st Person Developer- CBE software Publisher- CBE software Platform-...
Tainted grail ဂိမ်းအပြည့်အစုံ
Tainted Grail သည် နည်းဗျူဟာ၊ သုတေသနနှင့် ပွင့်လင်းသောကမ္ဘာတို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်သည့် စွန့်စားခန်း အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်သည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှည်လျားပြီး အန္တရာယ်များသော ခရီး၊ ကြီးမားသောကမ္ဘာ၊ NPC များစွာနှင့် အခြားအရာများစွာကို သင်တွေ့လိမ့်မည်... ခေါင်းစဉ်- Tainted Grail ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- 2020 အမျိုးအစား- RPG၊ Open World Developer: Awaken Realms ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ဝေသူ- Awaken Realms ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်း- PC ဖော်ပြချက်- ဂိမ်း…
WAR THUNDER အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Char D2 သည် Char B1 ထက် ပိုမိုပေါ့ပါးပြီး စျေးသက်သာသော အစားထိုးတစ်မျိုးအဖြစ် Renault မှ ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသော ပြင်သစ်အလယ်အလတ်တင့်ကားဖြစ်သည်။ 1940 ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်စဉ်အတွင်းပြင်းထန်သောတိုက်ပွဲများအပြီးတွင် WAR THUNDER အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းသည် ပြင်သစ်သမ္မတနိုင်ငံအလံအောက်ရှိ Char D2 သည် War Thunder ၏အတုမဲ့စစ်မြေပြင်အတွင်းသို့ ပေါက်ကြားလာလိမ့်မည်...
TakeOver (2019) PC
TakeOver သည် “beat 'em up” ၏ပေါင်းစပ်မှုဖြင့် ခေတ်နောက်မီပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဘေးထွက်မြင်ကွင်းရှိသော ဂန္တဝင်ဇာတ်လမ်းအခြေခံ တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤတွင် သင်သည် မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသော တိုက်ပွဲများ၊ အကောင်းဆုံးဇာတ်ကွက်များနှင့် အခြားများစွာကို တွေ့ရလိမ့်မည်... ခေါင်းစဉ်- TakeOver ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- နိုဝင်ဘာ 10၊ 2019 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ အာကိတ်ထုတ်လုပ်သူ- Pelikan13 ထုတ်ဝေသူ- Pelikan13 ပလပ်ဖောင်း- PC...
CONAN EXILES အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Conan Exiles ဒေါင်းလုဒ်သည် Conan the Barbarian စာအုပ်များကိုအခြေခံထားသော open-world survival ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ကြမ်းတမ်းသောကမ္ဘာတွင် ရှင်သန်ပါ၊ သင့်အိမ်နှင့်နိုင်ငံတော်ကို တည်ဆောက်ပါ၊ ရောယှက်တိုက်ပွဲများတွင် ရန်သူများကို ချေမှုန်းပါ။ ထုတ်ဝေသည့်နှစ်- 2018 အမျိုးအစား- RPG / 3D / Action Developer: Funcom ဘာသာစကား: အင်္ဂလိပ် | များစွာသောစနစ်လိုအပ်ချက်များ လည်ပတ်မှုစနစ်- Windows7/ Windows 8.1 / Windows 10…
The Elder Scrolls V: Skyrim – အထူးထုတ်ဝေမှု
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition သည် မူရင်း The Elder Scrolls V: Skyrim ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး ချဲ့ထွင်ထားသော ပြန်လည်ထုတ်ဝေမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်သူအသစ်များ၊ စက်ကိရိယာများ၊ တည်နေရာများ၊ ဇာတ်ကောင်များနှင့် DLC အားလုံးကို ထည့်သွင်းထားသည်။ ထို့အပြင်၊ Legendary Edition သည် ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားပြီး သက်ရောက်မှုအသစ်များနှင့် အသေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးမြှင့်ထားသည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- အောက်တိုဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၆ အမျိုးအစား-…
PC Complete Edition အတွက် GTA4ဒေါင်းလုဒ်ကို ဖိသိပ်ထားသည်။
PC အတွက် GTA4အလွန်ချုံ့ထားသောဒေါင်းလုဒ်သည် HD စကြဝဠာကိုဖွင့်ပေးသည်။ ဤစီးရီးသည် တိုးတက်မှု မရပ်မနား ဖြစ်နေခြင်း၏ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ဥပမာတစ်ခု ဖြစ်သည်။ စာရေးသူသည် ခိုင်မာသောတိုးတက်မှုကို ပြသနေသည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၏ အခြေခံအုတ်မြစ်များထဲမှ တစ်ခုသည် ဖြစ်ပျက်သမျှအရာတိုင်း၏ တောက်ပသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အရောင်ခြယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကစားသမားက ကားခိုး၊ သတ်ရမယ်...
Jump Force - BANDAI NAMCO အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ဂိမ်းကစားခြင်းBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 24, 2022 မှတ်ချက် Leave
JUMP Force အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်သည် စကြဝဠာအမျိုးမျိုးရှိ နာမည်ကြီး anime နှင့် manga သူရဲကောင်းများ စုစည်းထားသော တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းဖြစ်သည်- Dragon Ball Z၊ One Piece၊ Naruto နှင့် အခြားအရာများ။ ၎င်းတို့သည် ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကျရောက်တော့မည့် ခြိမ်းခြောက်မှုမှ ကယ်တင်ရန် အင်အားစုများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ခေါင်းစဉ်- JUMP FORCE ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- ဖေဖော်ဝါရီ 15၊ 2019 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ 3D ဖန်တီးသူ- Spike Chunsoft Co., Ltd. ထုတ်ဝေသူ-...
EVERSPACE အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 24, 2022 မှတ်ချက် Leave
Everspace သည် တစ်ဦးတည်း ကစားသူ အာကာသ သေနတ်သမား ဖြစ်သည်။ Roguelike ဒြပ်စင်များကို ခေတ်မီဂရပ်ဖစ်များနှင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော၊ အရောင်အသွေးစုံပြီး အံ့သြဖွယ်ရာများပြည့်နှက်နေသော စကြာဝဠာကိုဖြတ်၍ အန္တရာယ်ရှိသောခရီးကို သင်စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- မေလ 26 ရက်၊ 2017 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ သရုပ်သကန်၊ အရိုအသေပေးသူ- ROCKFISH ဂိမ်းများ ပလပ်ဖောင်း- PC ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- လိုင်စင် မျက်နှာပြင် ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ နှင့် Multi12...
DRAGON BALL Z- KAKAROT (2020)
UncategorizedBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 24, 2022 မှတ်ချက် Leave
Dragon Ball Z: Kakarot သည် ဂျပန်လူမျိုး ဇာတ်လိုက်ဂိမ်း နှင့် ဓားထိုးခြင်း ပေါင်းစပ်ထားသော အက်ရှင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Dragon Ball စကြာဝဠာသို့ သွားပြီး သဘာဝလွန် စွမ်းအားများ ရှိသော Son Goku ၏ ဘဝ ကို ဖြတ်သန်းရမည်... Dragon Ball Z Kakarot မည်ကဲ့သို့ Dragon Ball Z Kakarot တွင် Dragon Pearls ကိုရယူရန်7ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။
Emerald Lake အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
မြကန်သည် ရေကန်ဘေးတွင်ရှိသော ကလေးစခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကြောင့် ဒီစခန်းကို စွန့်ပစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ စခန်းကို ဘာကြောင့်ပိတ်ပြီး စွန့်လွှတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ အဓိကဇာတ်ကောင် မိုက်ကယ်က သူ့အစ်ကို Peter ကိုရှာဖို့ ဒီစခန်းကို သွားခဲ့တယ်...
Project Zomboid အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
ပရောဂျက် Zomboid (ပရောဂျက် Zomboid) သည် မကောင်းသော ဖုတ်ကောင်များဝန်းရံထားသော ရှင်သန်မှုအတွက် ရည်စူးပါသည်။ သင်၏ အားလပ်ချိန်များကို ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော လှုပ်ရှားမှုတွင် သင်မြှုပ်နှံနိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် ကစားသမားအများအပြား၏အကူအညီဖြင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် ပူးပေါင်းပါ။ ကျယ်ပြန့်သောမြေပုံတစ်ခုတွင် အချိန်ကိုသတ်ရန်၊ ရိက္ခာဖြည့်တင်းရန်နှင့် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော လူသေများနှင့် တိုက်ခိုက်ရန် အခွင့်အရေးမျိုးစုံနှင့် ပြည့်နေပါသည်။...
Zombie Army 4: Dead War အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း ဗားရှင်းအပြည့်အစုံသည် ကစားသမားများအား နာဇီဖုတ်ကောင်များစွာဖြင့် အမြင့်ဆုံးသွေးနှင့် ရောယှက်တိုက်ပွဲများကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုအကြောင်း ပြောဆိုပါက၊ developer များသည် ဂိမ်း၏ post-apocalyptic အစိတ်အပိုင်းကို အာရုံစိုက်ကာ ဤအခိုက်အတန့်ကို အနိမ့်ဆုံးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဤအပိုင်းတွင်4ခုအထိ ပူးတွဲမုဒ်ပါရှိပါသည်။
Calibre အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Calibre download သည် ပစ်ခတ်မှု၊ အန္တရာယ်များသော အလုပ်များ၊ အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရေး စစ်ဆင်ရေးများ၊ လက်နက်ပင်လယ် နှင့် မကြုံစဖူးသော လက်တွေ့ဆန်မှုတို့က သင့်အား စောင့်ကြိုနေသည့် multiplayer third-person shooter တစ်ခုဖြစ်သည်။ အတော်လေး အဆင့်အတန်းရှိပြီး အထူးတပ်ဖွဲ့များကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွင် ပါ၀င်သည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်...
Dark Light အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Dark Light သည် ထူးထူးခြားခြား ဂိမ်းဆော့သည့် သိပ္ပံ-Fi အက်ရှင်-ထုပ်ပိုးထားသော ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည် သဘာဝလွန်သတ္တဝါများနေထိုင်ရာ ဆိုက်ဘာပန့်ခ်၏ အပျက်အစီးကမ္ဘာကိုဖြတ်၍ အန္တရာယ်ရှိသောခရီးကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ Dark Light ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- အစောပိုင်းဝင်ရောက်မှု မေလ 8 ရက်၊ 2020 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ စွန့်စားခန်း၊ ပလပ်ဖောင်း၊ 2D ထုတ်လုပ်သူ- Mirari & Co. ပလပ်ဖောင်း- PC ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- အစောပိုင်းဝင်ရောက်အသုံးပြုမှု အင်တာဖေ့စ်ဘာသာစကား-…
Nimbatus - အာကာသမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်တည်ဆောက်သူ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 21, 2022 မှတ်ချက် Leave
ဤဂိမ်းတွင် သင်သည် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးဆုံးမိုဘိုင်းဒရုန်းစက်ရုံဖြစ်သည့် Nimbatus ၏ ကပ္ပတိန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဒရုန်းများကိုတည်ဆောက်ပြီး ရူပဗေဒနိယာမများအားလုံးကို ကျင့်သုံးသည့် စကြာဝဠာကို စူးစမ်းပါ။ Nimbatus အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်- ရှင်သန်ရန်အတွက် မတူညီသော biomes ရှိ လုံးဝပျက်စီးနိုင်သော ဂြိုလ်များကို ဖြတ်သန်းရမည်ဖြစ်သည်။ ပြီးပြည့်စုံသော ဖန်တီးမှုလွတ်လပ်မှုကို ခံစားပြီး…
PC Review တွင် အခမဲ့ Blackthorn Arena ဂိမ်း
Blackthorn Arena သည် သင်ကွင်း၏ပိုင်ရှင်အစစ်အမှန်ဖြစ်လာနိုင်ပြီး သင်နှင့်သင့်ကွင်းကိုဂုဏ်တင်မည့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှတိုက်ခိုက်မည့် gladiator များကိုပြင်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည့် Gladiatorial Arena ပိုင်ရှင်၏ Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ်ကူးယဉ် အလကားမြေများ ပိုင်နက်ပေါ်တွင်...
Minecraft Dungeons အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Minecraft: Dungeons သည် ကွန်ပြူတာကစားနည်းဂိမ်းများအတွက် dungeon အမျိုးအစားဖန်တီးမှုသမိုင်းတစ်ခုလုံးကို စုပ်ယူထားသည့် Mojang ၏ ပြီးပြည့်စုံသောဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်အဆန်းကို ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာများ၊ Nintendo Switch၊ PS4၊ Xbox One နှင့် Game Pass များတွင် ကစားနိုင်သည်။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- မေလ 26 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ RPG၊ စွန့်စားမှု ဖန်တီးသူ- Mojang Studios ပလပ်ဖောင်း- PC...
Fury Unleashed အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
၎င်းသည် လမ်းကြောင်းအားလုံးကို ပြေးပြီး ပစ်ရန် အမြန်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော အဆင့်များနှင့် ကျပန်းအရာများစွာသည် သင့်အား မငြီးငွေ့စေပါ။ ဤအရာအားလုံးကို လှပသော ခေတ်မီ 2D ဂရပ်ဖစ်များဖြင့် မြင့်မားသော ရုပ်ထွက်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ Fury Unleashed ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။ ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- မေလ 8 ရက်၊ 2020 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ Shoot'em up၊ ပလပ်ဖောင်းထုတ်လုပ်သူ- အမိုက်စားဂိမ်းများ...
reviewsBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 21, 2022 မှတ်ချက် Leave
ဗီဒီယိုကို နောက်မှကြည့်ချင်သော်လည်း အင်တာနက်သုံးခွင့်ရှိတော့မည်မဟုတ်ပါ။ မနက်ဖြန် သို့မဟုတ် တစ်နာရီအတွင်း ဗီဒီယိုကို အကြောင်းပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် အခြားတစ်ခုကြောင့် ဖျက်ပစ်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်နှင့် ကွန်ပျူတာတို့တွင် YouTube ဗီဒီယိုများကို အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နည်းကို ပြသပါမည်။ YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် အမြန်ဆုံးနည်းလမ်း...
SOULCALIBUR VI- Deluxe Edition (2018) PC
Soulcalibur VI သည် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများက လက်နက်အပြည့်အ၀အသုံးပြုသည့် တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းများ ဆက်တိုက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်၊ အကောင်းဆုံးစစ်သည်တော်များသည် ဒဏ္ဍာရီဓားကိုပိုင်ဆိုင်ရန်အတွက် ရောယှက်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရပြန်သည်။ အဖြစ်အပျက်များသည် ဆယ့်ခြောက်ရာစုတွင် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မူလဂိမ်း၏အချိန်ကာလသို့ ပြန်သွားကာ ထိုအရာများတွင် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော အသေးစိတ်အချက်အလတ်အသစ်များကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်...
Sniper Elite V2 ပြန်လည်မာစတာ (2019)
Sniper Elite V2 ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီး၏ မှောင်မိုက်သောနေ့ရက်များတွင်၊ ဘာလင်၏အပျက်အစီးများကြားတွင်၊ ကျည်ဆံတစ်ချက်က သမိုင်းကိုပြောင်းလဲစေသည်… Elite စနိုက်ပါသမား Karl Fairburn သည် ဤနာမည်ကြီးဂိမ်း၏မွမ်းမံထားသောဗားရှင်းတွင် လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးများဖြင့် ရှေ့တန်းသို့ပြန်ရောက်လာသည်။ Sniper Elite V2You တွင် အထက်တန်းစား US စနိုက်ပါသမား Carl Fairburn၊...
PC ရှိ အကောင်းဆုံး တိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းများ – ဗားရှင်းအပြည့်အစုံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
ဂိမ်းကစားခြင်းBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 21, 2022 မှတ်ချက် Leave
အမျိုးမျိုးသောအွန်လိုင်းဂိမ်းများထဲမှ PC ပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းများသည် အသုံးအနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားတွင် ၎င်း၏ချစ်သူများ သေချာပေါက်ရှိသော်လည်း၊ လောလောဆယ်တွင် "စင်ကြယ်သော" ဂိမ်းများဖြစ်သည့် အွန်လိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးဂိမ်းများကို လက်ချောင်းများပေါ်တွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ PC မှာ ပိုက်ဆံပိုရှိတယ်။ အဲဒါက ဘယ်လိုဆက်စပ်လဲလို့ မေးရင်...
FIFA 11 (2010) အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 17, 2022 မှတ်ချက် Leave
မည်သည့်ဦးတည်ချက်တွင်မဆို ခုန်ပေါက်ခြင်း၏ဆန်းသစ်သောစနစ်သည် ဂိမ်းအပေါ် လုံးဝထိန်းချုပ်မှုပေးသည်။ မျိုးဆက်သစ် အန်နီမေးရှင်းနည်းပညာသည် နည်းပညာကစားသမားများအား တွန်းကန်အားဖြင့် ဖြတ်ကျော်ကာ ခံစစ်များကို ရှောင်လွှဲနိုင်စေပါသည်။ ဂိမ်း၏ ရူပဗေဒပုံစံသည် ဘောလုံးအတွက် ပိုမိုကွဲပြားသော၊ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီး ခန့်မှန်းနိုင်မှုနည်းပါးသော ရုန်းကန်မှုကို လုပ်ဆောင်ရန် ကူညီပေးသည့် တိုက်မိမှု တွက်ချက်မှုစနစ်အသစ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ Be နှင့်အတူ…
Stoneshard အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Stoneshard ဒေါင်းလုဒ်သည် အခမဲ့စုပ်ယူနိုင်သော bagel တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးမျိုးသော monsters၊ ရတနာလိုက်စားမှုများ၊ စိတ်ဝင်စားစရာအလုပ်များနှင့် အခြားများစွာဖြင့် တိုက်ပွဲများကို စောင့်မျှော်နေသော bagel တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- အစောပိုင်းဝင်ရောက်ခွင့် ဖေဖော်ဝါရီ 6၊ 2020 အမျိုးအစား- RPG၊ Roguelike Developer : Ink Stains Games ထုတ်ဝေသူ- HypeTrain ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလပ်ဖောင်း- PC၊ PlayStation4ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- စောစီးစွာ အသုံးပြုခွင့်...
Temtem အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
နောက်ဆုံးတွင်၊ developer များသည် ဂိမ်းကစားခြင်းကိုသာမက လူမှုရေးဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများကိုပါ အာရုံစိုက်သည့်ဂိမ်းများကို စတင်အာရုံစိုက်လာကြသည်။ ယနေ့တွင် သင်သည် Temtem ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ကျွန်းစုတစ်ခုလုံးရှိ ရေပေါ်ကျွန်းစုတစ်ခုလုံးတွင် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာစွန့်စားခန်းတစ်ခုကို စတင်ရန် အခွင့်အရေးရပါလိမ့်မည်။ Temtem အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဤနယ်မြေကို လျှော့မတွက်သင့်ပါ...
Predator- အမဲလိုက်ကွင်းများ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Predator- Hunting Grounds သည် အန္တရာယ်အရှိဆုံး သားကောင်ကို လိုက်ဖမ်းနေသည့် အဝေးတောထဲတွင် နေရာယူထားသော အချိုးမညီသော ကစားသူပေါင်းစုံ သေနတ်သမားဖြစ်သည်။ လူလေးယောက်ပါဝင်သော လက်ရွေးစင်အသင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကစားပြီး Predator မှ ပုန်းအောင်းနေစဉ် တိုက်ခိုက်ရေးမစ်ရှင်များကို အပြီးသတ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Predator တစ်ယောက်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို ခံယူပြီး အထိုက်တန်ဆုံးသူကို ရှာဖွေပါ...
Dark Souls 3: Deluxe Edition အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Dark Souls3ဂိမ်းတွင် ကြီးမားသော ပွင့်လင်းကမ္ဘာတစ်ခု ပါဝင်သည်။ အဓိကဇာတ်ကောင်သည် ပျောက်ဆုံးသွားသောကမ္ဘာတွင် ကျင်လည်ကျက်စားပြီး သူ၏ကျိန်ခြင်းကို နားလည်ရန် ကြိုးစားကာ ဤအမှောင်ကမ္ဘာများမှ ထွက်လမ်းကိုရှာဖွေရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် နတ်ဆိုးများနှင့် တိုက်ခိုက်သည်။ မင်းက သူ့အတွက် ကစားနေတာ၊ မင်း ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို စုပ်နိုင်တယ်၊ မင်းမှာ ဓားနဲ့ မှော်တွေရှိတယ်။ ထုတ်ဝေမည့်ရက်- ဧပြီလ...
Kenshi အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Kenshi၊ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးထားတဲ့ အမိုက်စား sandbox ဂိမ်းတစ်ခု။ သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲတယ်လို့ လူတွေက အမြဲပြောနေကြပေမယ့် မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကို ဆုံးဖြတ်တဲ့ သာမန်လူတစ်ယောက်အတွက် ပိုလို့တောင် ခက်ခဲတယ်လို့ ဘယ်သူမှ မပြောကြပါဘူး။ Kenshi အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- ဒီဇင်ဘာ 6၊ 2018 အမျိုးအစား- RPG၊ Simulator၊ Strategy၊ Sandbox၊ Open...
DreadOut2အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
DreadOut2အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်သည် တတိယလူမြင်ကွင်းဖြင့် ပြင်းထန်သော ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ ပထမပိုင်း၏ အဆက်ဖြစ်သည်။ ဤတစ်ကြိမ်တွင် သင်သည် မြို့တော်ကျယ်ကြီးရှိ Linda ဟုခေါ်သော မိန်းကလေးတစ်ဦးအဖြစ် ရှင်သန်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဘီလူးများကို တိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အန္တရာယ်များမှ ပြေးလွှားကာ နောက်ထပ်များစွာ လုပ်ဆောင်ရမည်... ထုတ်ဝေမည့်ရက်စွဲ- ဖေဖော်ဝါရီ 21၊ 2020 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ Sirvival ထိတ်လန့်စရာ၊ 3rd Person...
သုံးနိုင်ငံ XIV (2020) PC ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်း
Three Kingdoms XIV ၏ အချစ်ဇာတ်လမ်းသည် တရုတ်ခေတ်တွင် အလှည့်ကျနည်းဗျူဟာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ ဂိုဏ်းခွဲများကြား ပိုင်းခြားထားသော တရုတ်နှင့် ၎င်း၏နယ်မြေအားလုံးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရန်၊ အောင်ပွဲရယူပြီး တရုတ်အင်ပါယာ၏ ကံကြမ္မာကို ပြန်လည်ရေးသားခြင်း... အမျိုးအစား- ဗျူဟာ၊ TBS ပြုစုသူ- KOEI TECMO GAMES CO., LTD. ပလပ်ဖောင်း- PC Interface ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi5 ဖော်ပြချက်- သဘာဝအတိုင်း၊...
Battle Carnival အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 14, 2022 မှတ်ချက် Leave
Battle Carnival သည် သတ်မှတ်ပုံစံများအားလုံးကို ချိုးဖျက်နိုင်သော အွန်လိုင်းကားမောင်းသေနတ်သမားဖြစ်သည်။ ဖိနပ်တစ်ရံ၊ မိုက်ခရိုဖုန်းဖြင့် ရန်သူများကို တိုက်ခိုက်ပါ သို့မဟုတ် ချွန်ထက်သော ရေခဲပုဆိန်ကို အသုံးပြုပါ။ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများနှင့် ကန့်သတ်ချက်များမရှိပါ - အကြီးမားဆုံးသေနတ်ကိုယူပြီး သွေးစွန်းနေသော အသားကြိတ်စက်ထဲသို့ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပါ။ Battle Carnival ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်နှစ်- 2016 အမျိုးအစား- အက်ရှင်၊ MMOFPS၊ Shooter၊ အွန်လိုင်းပလပ်ဖောင်း- PC ဖော်ပြချက်- ခေတ်သစ်သူပုန်သေနတ်သမား...
Huntdown (2020) အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Huntdown အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်- ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် ငွေရှာခြင်းသည် ခက်ခဲသည်... သေချာပါသည်၊ သင်သည် ငွေရှာသူမဟုတ်ပါက၊ အနာဂတ်က ခြံထဲမှာ။ လမ်းများပေါ်တွင် အကြမ်းဖက်မှုများ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေပြီး ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများက မြို့ကို အုပ်စိုးကာ ရဲများသည် အင်အားမရှိသည့်အပြင် မုဆိုးများကသာ မြို့ကို ရာဇ၀တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှ ကယ်တင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်လာပါ…
Hades အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Hades သည် သေမင်း၏နတ်ဘုရားကို စိန်ခေါ်ရမည့် ဂရိဒဏ္ဍာရီကိုအခြေခံ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် အဖြစ်အပျက်များ ပျံ့နှံ့နေသော Bastion နှင့် Transistor ကိုဖန်တီးသူများထံမှ bagel တစ်ခုဖြစ်သည်။ Hades ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- အစောပိုင်းဝင်ရောက်မှု ဒီဇင်ဘာ 10၊ 2019 အမျိုးအစား- လုပ်ဆောင်ချက်၊ Roguelike ဖော်ပြချက်- သင်၏စာပိုဒ်အသစ်တိုင်းသည် ယခင်နှင့်မတူတော့ပါ။…
Yakuza: Dragon Role-Playing Adventure Game ကဲ့သို့ Version အပြည့်
Yakuza- Dragon ကဲ့သို့ပင် - ကုမ္ပဏီ SEGA ၏ တီထွင်ဖန်တီးမှုဖြစ်သော စွန့်စားခန်းဂိမ်း၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် အလှည့်အပြောင်းများဖြင့် လှုပ်ရှားမှု။ ဂိမ်းတွင် အဓိကဇာတ်ကောင်မှာ အဆင့်နိမ့် Yakuza – Ichiban Kasuge ဖြစ်သည်။ သူတစ်ခါမှမကျူးလွန်ဖူးတဲ့ ပြစ်မှုအတွက် ထောင် 18 နှစ်နေခဲ့ရပြီးနောက် Kasuge ဟာ လွတ်မြောက်သွားပြီး အရမ်းချစ်ရတဲ့သူတိုင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်...
Spirit of the North အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ်အပြည့်အစုံ - ဗားရှင်း
Spirit of the North ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းသည် ရောင်စုံနှင့် အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော စွန့်စားခန်းများ၊ ပဟေဠိများ၊ ပဟေဠိများနှင့် အခြားအရာများ ပြည့်နှက်နေသည့် တစ်ကိုယ်တော် တတိယလူ အင်ဒီဇာတ်လမ်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး စွန့်စားခန်းများ၊ ပဟေဠိများ၊ ပဟေဠိများနှင့် အခြားအရာများ... ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- မေလ7ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- စွန့်စားခန်း၊ အင်ဒီဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူ- Infuse Studio ထုတ်ဝေသူ- ဂိမ်းများ ပေါင်းစည်းခြင်း ပလပ်ဖောင်း- PC၊ PlayStation4ထုတ်ဝေမှု အမျိုးအစား- လိုင်စင် အင်တာဖေ့စ် ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ်၊ Multi10…
This War of Mine အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ် PC Game Full Version
ကျွန်ုပ်၏ဤစစ်ပွဲသည် အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း- ကမ္ဘာကိုကယ်တင်သည့် ရဲရင့်သောစစ်သားတစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကို သင်စိတ်ကူးမယဉ်ဘဲ စစ်ဘက်ဆောင်ပုဒ်ပေါ်ရှိ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤနေရာတွင် သင်သည် ရိုးရှင်းသောနေထိုင်သူဘက်မှ ရပ်တည်မည်ဖြစ်သည်။ မြို့ကို ဝိုင်းရံထားပြီး အမှောင်ထုနှင့် ပရမ်းပတာ လွှမ်းခြုံထားသည်။ မင်းရဲ့ တစ်ခုတည်းသော ပန်းတိုင်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆို ရှင်သန်ဖို့ပါပဲ...
Survivalist- Invisible Strain အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ဂိမ်း - ဗားရှင်းအပြည့်အစုံ
Survivalist- Invisible Strain သည် လူ့ယဉ်ကျေးမှု ပြိုလဲပြီး ဖုတ်ကောင်များ ထွန်းကားပြီးနောက် ပရမ်းပတာ နစ်မြုပ်နေသော ကမ္ဘာ၏ ကျယ်ပြောလှသော ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာ Simulator တစ်ခုဖြစ်သည်... Survivalist အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ် ထုတ်ဝေသည့်ရက်စွဲ- အစောပိုင်း ဝင်ရောက်ရန် ဇွန်လ 1 ရက်၊ 2020 အမျိုးအစား- လှုပ်ရှားမှု။ ၊ ဗျူဟာ၊ ရှင်သန်မှု ပြုစုသူ- Bob ပလပ်ဖောင်း- PC အင်တာဖေ့စ် ဘာသာစကား- အင်္ဂလိပ် အသံ ဘာသာစကား- မရှိပါ...
Injustice 2- ဒဏ္ဍာရီစာအုပ်
Injustice2သည် တိုက်ပွဲဂိမ်း Injustice: Gods Among Us ၏ အဆက်ဖြစ်ပြီး ကစားသမားများအား ဂန္တဝင် DC ဇာတ်ကောင်များကြား တိုက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ရန် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ အထူးစက်ကိရိယာစနစ်သည် သင့်အား စူပါဟီးရိုးများနှင့် စူပါဗီလိန်တစ်ဦးစီကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်စေပြီး ၎င်းကိုထူးခြားစေသည်။ အသုံးပြုသူသည် အသွင်အပြင်၊ တိုက်ပွဲပုံစံကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များချနိုင်သည်...
World War Z – Goty Edition ဗားရှင်းအပြည့်
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 မှတ်ချက် Leave
စတူဒီယို Paramount Pictures နှင့် Saber Interactive ကုမ္ပဏီသည် ဖုတ်ကောင်များနှင့် တက်ကြွသောတိုက်ပွဲ၏ ပရိသတ်များကို နှစ်သက်စေရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယခုတစ်ကြိမ်တွင် ၎င်းတို့သည် ဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာသို့သွားရန် ကမ်းလှမ်းသည့် World War Z ဂိမ်းကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၏ ကြမ်းတမ်းသောဖြစ်ရပ်မှန်များတွင် ရှင်သန်ရန်ကြိုးစားသည်။ World War Z ကို အခုပဲ ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါပြီ...
ရုပ်ရှင်တွေBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 11, 2022 မှတ်ချက် Leave
Disney Animation သည် လာမည့် အန်နီမေးရှင်းဇာတ်ကား Raya and the Last Dragon အတွက် ပထမဆုံးနမူနာကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အကြိုကြည့်ရှုမှုသည် Pixar's Soul ကဲ့သို့သော ရုပ်ရှင်များနှင့်မတူဘဲ ကဇာတ်ရုံတွင် ရုံတင်ပြသရန် စီစဉ်ထားဆဲဖြစ်သည့် ကာတွန်းစွန့်စားမှုအသစ်ကို ပထမဆုံး အရိပ်အယောင် ပြသပေးပါသည်။ Movierulz Raya and the Last Dragon သည် 11 ခုနှစ် မတ်လ 2021 ရက်နေ့တွင် ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသရန် စီစဉ်ထားသည်။...
SnowRunner: MudRunner ဂိမ်း ဗားရှင်းအပြည့်
PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 10, 2022 မှတ်ချက် Leave
SnowRunner သည် လူသိများသော Spintires: MudRunner ၏ အဆက်အစပ်ဖြစ်သည့် Focus Home Interactive မှ တက်ကြွပြီး လက်တွေ့ကျသော Simulator အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကစားသမားများသည် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး ကုန်တင်ကားကြီးများ မောင်းနှင်သူဖြစ်သည့် အလွန်အန္တရာယ်များပြီး လွန်ကဲသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၏ လက်တွေ့ဘဝသို့ ဝင်ရောက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ SnowRunner ဒေါင်းလုဒ်ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲ- ဧပြီလ 28 ရက်၊ 2020 ခုနှစ် အမျိုးအစား- သရုပ်ပြမှု၊ ပြိုင်ကား၊ 3D ဖန်တီးသူ- Saber Interactive Platform-...
Age of Empires Definitive Edition- အခမဲ့ ဒေါင်းလုဒ် ဗားရှင်း အပြည့်အစုံ
နယူးအားကစားပြိုင်ပွဲ, PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 10, 2022 မှတ်ချက် Leave
ဂိမ်းဖော်ပြချက်- ထုတ်ဝေမှုအသစ်တွင် Age of Empires Definitive Edition ဂိမ်း၏ ဂန္တဝင်နည်းဗျူဟာကို ကျွန်ုပ်တို့ သင့်အား တင်ဆက်ထားပါသည်။ နှစ် 20 ပြည့်မြောက်တဲ့ စီးရီးကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဖန်တီးခဲ့တာပါ။ ဒီဂိမ်းဟာ ဂိမ်းကစားသူတွေရဲ့ နှလုံးသားနဲ့ စိတ်တွေကို သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ ကွန်ပြူတာဗျူဟာရဲ့ တကယ့်အစစ်အမှန်ဂိမ်းကို ပြန်လည်ဖန်တီးထားတာပါ...
Valorant သည် Riot Games မှ အခမဲ့ အပြိုင်အဆိုင် ဂိမ်းနည်းဗျူဟာ သေနတ်သမား ဖြစ်သည်။
နယူးအားကစားပြိုင်ပွဲ, PC ဂိမ်းများBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 9, 2022 မှတ်ချက် Leave
Valorant သည် PC အတွက် Riot Games (League of Legends) မှ အခမဲ့5မှ5နည်းဗျူဟာမြောက် သေနတ်ပစ်ဂိမ်းဖြစ်သည်။ Valorant Riot Games သည် 2020 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိရန် စီစဉ်ထားပြီး developer များသည် ကစားသမားအားလုံးအတွက် 128 နှင့် အနည်းဆုံး 30 FPS နှုန်းဖြင့် အခမဲ့ဆာဗာများကို developer များက ကတိပြုပါသည်။ Riot Games ကိုလည်း ကတိပေးပါတယ်...
PC ဂိမ်းများ, reviews, ထိပ်တန်းအားကစားပြိုင်ပွဲBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 9, 2022 မှတ်ချက် Leave
Fortnite နှင့် PlayerUnknown BattleGround (PUBG) ၏ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများကြောင့် Battle Royale အမျိုးအစားသည် ကစားသမားများအတွက်သာမက ဗီဒီယိုဂိမ်းထုတ်ဝေသူများအတွက်ပါ မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာပါသည်။ Apex Legends ဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့်၊ Electronic Arts သည် ၎င်းတို့၏ Battle Royale သေနတ်ကို Respawn Entertainment ဖြင့် ပေးအပ်သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်း Apex Legends သည် 25 သန်းရေတွက်ရန်ကြေငြာခဲ့သည်...
အံ့အားသင့်စရာ! Frozen2သည် ယခု Disney Plus တွင် ရှိနေသည်- ရုပ်ရှင်ကို မည်သည့်နေရာတွင်မဆို အွန်လိုင်းမှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုပါ။
ကာတွန်း, reviewsBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 8, 2022 မှတ်ချက် Leave
The Lion King ၏ CGI ပြန်လည်မွမ်းမံမှု မပေါ်ပေါက်မီ ခြောက်နှစ်တာကာလအတွင်း Disney Frozen သည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး ကာတွန်းဇာတ်ကားများ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပထမတန်းကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ နောက်ဆက်တွဲကိုမစခင် Disney က တော်တော်ကြာအောင်စဉ်းစားခဲ့တာ အံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ Frozen2အသစ်သည် Disney Plus တွင် ယခုအချိန်တွင် စုဆောင်းရရှိမည်မှာ သေချာပါသည်။
3MOVIERULZ 2020 - လင့်ခ်များကိုတရားမ၀င်ထုတ်ဝေသောဝဘ်ဆိုဒ်
ရုပ်ရှင်တွေBy Margaret Caffrey ဇန်နဝါရီလ 8, 2022 မှတ်ချက် Leave
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိကြသည့်အတိုင်း ထုတ်လုပ်သူတစ်ဦးသည် ၎င်း၏ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် သန်းနှင့်ချီသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသောအခါ၊ ရလဒ်အနေဖြင့် အမြင့်ဆုံးအမြတ်အစွန်းဖြင့် အောင်မြင်မှုများစွာရရှိရန် မျှော်မှန်းထားသည်။ ဒီဇာတ်ကားကို ဘယ်အချိန်မှာ ရုံတင်ပြသပြီး ပရိသတ် အများအပြား လာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ…